Ibsaa Jireenyaa - Page 32 of 73 - In sha Allah Ilma namaa daandii qajeelumma,gammachuu fi milkaa'innaa itti akeekudha.
Seenaa Itti Fufi
November 22, 2019 Sammubani One comment
5-Namni wanta haraamaa jaallatu Rabbiif jedhee dhiise, wanta san karaa halaalatiin argata ykn kan san caalu Rabbiin bakka isaaf buusa-Har’as imaamu ibn Al-Qayyim irraa jechoota mi’aawo haa habbuuqannu.
November 20, 2019 Sammubani Leave a comment
Kutaa darbee keessatti zinaan (sagaagalummaan) qormaata cimaa namni ittiin qoramuu fi namni qormaata kana darbe mindaa fi gammachuu guddaa akka argatu ilaalle turre. Dabalataanis karaalee zinatti nama geessanii fi akkaata isarraa of eegan jalqabnee turre. Har’as gargaarsaa Mawlaatin akkaata zinaa irraa itti of eegan ilaalu itti fufna.
November 19, 2019 Sammubani Leave a comment
Amaloota Gabroota Ar-Rahmaan-Guduunfaa
November 16, 2019 Sammubani Leave a comment
Alhamdulillah, amaloota gaggaarii Gabroota Ar-Rahmaan osoo ilaallu kunoo dhumarra geenye jirra. Har’a kutaa dhumaati fi mindaa isaanii ilaalun amaloota isaanii ni guduunfina. Dhugumatti namoonni amaloota gaggaarii qabanii fi hojii gaggaarii iimaana irratti hundeessun hojjatan, mindaan isaanii Rabbii olta’aa biratti garmalee guddaadha. Yaa obboleessa/ yaa obboleetti koo! Nu keessaa eenyutu amaloota gaggaarii kanaan of faayun ganda lamaanitti sadarkaa fi kabaja ol’aanaa irra gahuu barbaadaa? In sha Allah amaloota kanniin gara dhumaarratti ni guduunfina. Amma amaloota hafan haa ilaallu:
Amaloota Gabroota Ar-Rahmaan-Kutaa 7
November 15, 2019 Sammubani Leave a comment
Kutaa darbe keessatti amaloota gabroota Ar-Rahmaan ilaalaa turreera. Har’as mee amaloota isaanii biroo haa ilaallu. Tarii nutis isaan ilaalun eessa akka jirru of qorannee jijjiramaaf tarkaanfi jalqabu dandeenya. Dhugumatti, namoota gaggaarri fakkeenya godhatanii isaan duuka bu’uun wanta milkaa’innatti nama baasudha.
November 12, 2019 Sammubani Leave a comment
Kutaa darbe keessatti amaloota gabroota Ar-Rahmaan keessaa badiiwwan gurguddaa irraa fagaatan ilaalle jirra. Aayan armaan gadi immoo badii gurguddaa fi xixiqaa hundarraa fi wanta faaydi hin qabne irraa akka fagaatan ibsuun wanta darbe nuuf guduunfiti.
« 1 … 30 31 32 33 34 … 73 »